फाल्गुन ४, २०७३ डा. लालित कुमार मिश्र
काठमाडौं — रिस एक नकारात्मक मनोभावना हो । रिसको बाहरी तथा व्यवहारिकरुप भनेको कसैमाथि हमला वा आक्रमण गर्नु हो । रिसलाई सोझै देख्न सकिंदैन । तर, रिसाएको छभने थाहा हुन्छ । कुनै मानिस रिसाएको छ भन्ने कुरा उसको आक्रामक व्यवहारबाट थाहा हुन्छ । रिस मुलतः एउटै भए पनि यसका अनेकौ रुप छन् । दुख, द्वेष ईत्यादि रिसका बिभिन्न रुप छन् । रिसको प्रदर्शन तुरुन्त हुन न सकेमा यो दुख, द्वेषको रुपमा रहिरहन्छ र व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रुपले रोगि हुन जान्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७३ १८:४१
गृहमन्त्रीको निर्देशन : स्ववियु चुनावमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुस्
काठमाडौं — आगामी १४ गते हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा सबै किसिमका सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
स्ववियू चुनावमा आवश्यक पर्ने सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्नका निम्ती गृहमन्त्री निधिले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको छलफल डाकेका थिए । जसमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र उपत्यकाका क्याम्पस प्रमुखहरुको पनि उपस्थित थिए ।
छलफलमा केही क्याम्पस प्रमुखहरुले सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै केही दिन पर सारेर जानु पर्ने सुझाब राखेका थिए । तर गृहमन्त्री निधिले निर्धारित मिति तोकिएको चुनाव सार्नु राजनीतिक र शैक्षिक हिसाबले उपयुक्त नहुने बताएका थिए । छलफलमा त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाले तोकिएको मितिमै चुनाब गराउनु पर्ने बताए ।
आजै बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि स्ववियु चुनावका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख तीनै दलका शीर्ष नेता सम्मिलत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री निधिलाई जिम्मा दिएका थिए ।
पाठेघरको मुख, स्तन, प्रोस्टेट, आन्द्राको क्यान्सरको नि:शुल्क स्क्रिनिङ